Mampiaraka lahatsary chats an-tserasera amin'ny zazavavy - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Ny karazana fianakaviana sambatra aho te.
Tena tsara izany fomba mba hitsena ny olona eo amin'ny fiainanaoNa dia lavitra ny tanàna tsy mifanaraka na inona na inona olana. Te-hahita ny fiainana aiza ihany aho monogamous. Tiako ny hahita ny fiainana tokana, monogamous tsy ankavia sy ny ankavanana. Amin'ny Tsy manana fotoana be dia be, fa izaho kosa manana fanamarihana.
Ny ankizivavy - taona, niteraka roa avy amin'ny fahaterahana ny fitiavana tsy manimba ny hentitra indrindra ny fiainam-pianakaviana.
Fitarainana kokoa aho, saingy tsy afaka mitsara ho an'ny tenako. Mazava ho azy, azafady, misy vehivavy hafa ao amin'ny toerana ity.
Ny fahatsapana ny vehivavy ny nofy ao amin'ny mezomon ny manao ny marina ny nofy, mamy sy ny famindram-po, amin-kitsimpo ny fifandraisana sy ny tsara fandrahoan-tsakafo. misaotra anao Noho ny toy izany karazana ny mahia vehivavy biby, Paniel. Vehivavy mavitrika amin'ny fomba fiaina. Tiako ny any an-tokotany, ary izaho na oviana na fotoana ny saran-dalana sy ny maha-tongotra.
Izaho dia lehilahy iray sy ny vehivavy iray ao Ortodoksa fifandraisana, samy hafa fomba amam-panao, amin'ny olona isan-karazany manerana izao tontolo izao.
Izany no cozy toerana izay exudes cozy rivo-piainana. Fototry ny asa ny olona hahazo ny fitsaboana izay mety hanome azy ireo ny sakafo ara-pahasalamana.
Ny olona mijery ny aina ary mahatsiaro ho mahazo aina nandritra ny ara-kolontsaina sy ny fialam-boly, fanatanjahan-tena sasany zava-nitranga, ao amin'ny"sauna", dobo filomanosana na any an-tokotany.
Ho an'ny ny vehivavy dia ireo izay miandry tsy ny fotoana, fa noho ny fiainana. Lehilahy Stavropol. Eto ianareo afaka mijery ny mombamomba ny olona avy amin'ny faritra rehetra sy misoratra anarana maimaim-poana. Ho voasoratra ao amin'ny Stavropol faritra sy ny toerana hafa izay olona velona. Raha te-hahafantatra, get mifatotra, ho vaovao ny olom-pantatra sy ny namana, namana, azafady ankafizo ny Mampiaraka toerana.
ny vehivavy te hihaona aminao olon-dehibe Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny chat roulette tsiroaroa mitanjaka ny Fiarahana amin'ny lahatsary maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat efitra tsy misy fisoratana anarana fampidirana sary maimaim-poana jereo ny amin'ny chat roulette Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra mba hitsena anao amin'ny fifandraisana mampiaraka toerana ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana